vinyl Flooring, wpc vinyl Flooring sy spc Flooring
Vinyl Floor Tsindrio System Series
4.Base sosona amin'ny fiberglass
Changzhou Lingdian Wood orinasa naorina tamin'ny 2003. Ny fototra faritra dia 80.000 metatra toradroa. Isika no nitarika orinasa eo amin'ny sehatry ny vinyl Flooring, wpc vinyl Flooring sy ny spc Flooring any Shina. Fa vinyl Flooring, ny fahafahantsika dia mihoatra ny 150 fitoeran isam-bolana; Fa wpc vinyl Flooring. Ny fahaiza-dia mihoatra ny 150 fitoeran isam-bolana; Fa spc Flooring, ny fahaiza-manao dia mihoatra ny 50 kaontenera isam-bolana.